Articles - RAMANANTSOA Tovo
TAFIKA MASINA tany Mbahita (Bekily)
TAFIKA MASINA tany Mbahita (35 Km miala Bekily)
Nanantanteraka Tafika masina tany Ndahita izahay Mpiara mivavaka tamin'ny tapaky ny volana Septambara teo iny ka tany ambanivohitr'i Bekily, Eo amin'ny 35 Km eo ho eo. Enjana ny fitsapana natrehana teny an-dalana. Nampiseho ny maha TSITOHA AZY ilay MPAHARY ny tany sy ny lanitra (YHVH) tamin'ny niarovany anay teny an-dalana na nandroso izany na tamin'ny nody ary nandritra ny Tafika Masina .
Ny apostoly Paoly in3 vaky sambo (2Kor11:25) Fa izahay indroa (2) vaky carter.
Ny iray tamin'ny vao handroso afaka 25 Km an'i Ihosy hanakany Betroka eo amin'ny toerana fisian'ny mpanafika, amin'ny 15h30mn eo nanomboka nanamboatra ka savony sy tanimena no nampiasana ary tamin'ny 16h30mn tany vao afaka teo. Nisy ireo nitokana am-bavaka, nisy ireo nanamboatra ny fiara ary dia vita soamantsara ihany.Namakivaky iny tampon'i Ihorombe iny tao anaty alina maizina sady mikitroka (tsy misy fiara mifanena intsony ) sady nandeha mora nitandritandrina an'ilay fiara tsy nijanona mihitsy fa nandeha foana mandrapahatonga tany Bekily. Nisaorana ny Tompo JESOA.
Ny fahavakisan'ny carter faha (2) dia tamin'ny niverina. Izany hoe teo anelanelan'ny Betroka sy Ihosy. Izahay moa tamin'ny niverina dia niainga tamin'ny 2 ora maraina tany Bekily ary tao Betroka no nisakafo antoandro.
Tamin'ny vao niainga maraina ny fiara dia efa nandeha ny rojom-bavaka tao anaty fiara narahan'ny famakiana Salamo tsy nijanona. Tonga soamantsara tao Betroka izahay ary rehefa niainga ho any Ihosy teo 2 na 3 Km tsy hidirana an'i Ankelivaha tamin'ny 16h30mn dia teo no nahavaky fanindroany ny carter ary very tsy nisy menaka intsony. Izay fiara nandalo nahita anay dia niteny hoe ataovy izay hialanareo eo fa ratsy be io toerana io. Nandeha ny tolona am-bavaka isan-karazany, tao ny nitady vaha olana (hanamboarana ny carter, hanafatra menaka sns...).
Nalefa namonjy tanana (Ankelivaha)sahabo eo amin'ny 2 na 3Km nandeha an-tongotra ny vehivavy satria efa nanomboka ho hariva ny andro fa ny lehilahy kosa nijanona niandry ny fiara sy izay mety ho tohiny. Nandeha ny vavakay lehilahy , afaka 5mn indro ny camion citerne nandalo ary niangaviana mba hitarika ny fiara hamonjy tanana. Nahafinaritra ilay camion fa tsy nanisy olana mihitsy. Tanana nampiasan'EL SHADAY hamonjena anay indray indray izany iny. Nisy indray teo ny fidirana antsehatr'ilay TSITOHA .Ampahany ireo ary mora tantaraina fa enjana ny niaina azy, soa fa teo JESOA KRISTY niaro sy nivimbina anay.
Anisan'ny fitsapana ka nanehoan'i JESOA fa eo am-pelatanana ny zavatra rehetra dia ny fisian'ny fikasan'ireo dahalo hanafika ilay tanana izay nanaovana Tafika Masina. Andro alakamisy moa tamin'izay ary tsena ny andro (13/9/2018), ary feno olona mifamezivezy. Tonga eo daholo ny mpiantsena. Nitory filazantsara teny an-tsena izahay ary maro ny olona nanaiky an'i JESOA ho TOMPO sy MPAMONJY na dia nanano sarotra kely azy teo amin'ny fomba fiteny.
Ny hariva nandeha ny resaka fa hanafika io tanana io ny dahalo satria maro tamin'ireo mpanam-bola niantsena no tsy tafody ary anisan'ireo ho tafihin'ny dahalo koa izahay Mpanao Tafika Masina. Nandeha ny nivavaka izahay, nandefasana sms ny namana taty Antananarivo mba hitondra am-bavaka ihany koa , tsy fantatra na ahoana na ahona fa tsy rava ilay fanafihan'ny dahalo. Nisy tamin'ny namanay efa nahita ny maraina fa nisy lehilahy maromaro mipetraka nijery ny toerana nitobianay izay samy nanana basy vita gasy eny am-balahany .ISAORANA JESOSY fa TSY NISY ILAY FANAFIHANA rava noho ny famindrampon'JESOA KRISTY.
Ny hamaranana azy dia hoe TSARA JESOA, MPANAO TSARA IZY ary tiany Hovonjena ny olona rehetra ary mila ahy sy ianao hitondra ny famonjena hatrany amparan'ny tany.
DERAINA YHVH deraina mandrakizay mandrakizay amin'ny alalan'i YAHSUAH HA MACHIACH (JESOA KRISTY ).AMEN dia AMEN
Natao batisa tamin'ny 22 avril 2018 teo i Ariela kely. Nampidirina ho isan'ireo vahoak'i ELOHYM izy. Maro ireo havana nanotrona tamin'izany . Niara nientana izahay mpiraitam-po tamin'ny fanatanterahana ny batisa. Nivory isaky ny hariva nandritra ny herin'andro nanao ny fandaminana sy ny fizarana raharaha. Tao ny niantsena, tao ny nanao raharaha, tao ny nandamina trano sns....., niara nientana hatramin'ny ankizy tamin'ny fibatana ireo fitaovana maro hampiasaina(latabatra, seza,...) .
Mora ny fandaminana satria izay zavatra nilaina rehetra dia toa efa voalahatr'ilay MPAHARY daholo, na ireo olona hiara-miasa amin'ny fanatanterahana izany.
Olona teo amin'ny 40 izahay no niaraka nisakafo tao aorian'ny batisa ka natao tao an-trano ihany. Isaorana JESOA tamin'ny fahavitan'ny Batisan'ny rano sy Batisan'ny AFO.
Isaorana ADONAY ELOHYM tamin'ny zavatra nataony tamin'io fotoana io. Isaorana mandrakizay anie ny ANARANY MASINA . IZY irery ihany no ANDRIAMANITRA fa tsy misy ANDRIAMANITRA ankoatrany. AMEN
Salamo 72:19 :Ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza; ary aoka ny tany rehetra ho henika ny voninahiny. Amena dia Amena.
FANAFAHANA amin'ny herin'ny vola
Mila afahana amin'ny herin'ny vola ny olona. Maro ny olona no manompo Tompo 2 ka mila afahana ao amin'i JESOA KRISTY. Araho ato ary izany fanafahana amin'ny herin'ny vola izany.
FITOETRA (Fihaonana amin'i TOMPO) ao amin'ny efitra
Inona ny atao hoe fitoetra. Ny fitoetra dia resaka hifanaovana amin'i YHWH izay hampiasaina ny tsindrimandry ara-panahy (intuition spirituelle ) ao amin'ny efitra mangina. (matio6 :6). Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. (Flash mp3 player)
Araho ato ary izany
Niampy iray indray ny isan'ireo taranaka izay nomen'i JESOA KRISTY ahy sy i Holy, teraka tamin'ny 17 Juillet 2014 t@ 17h00 izy; vavy kely ary nataonay hoe RAMANANTSOA Miamina Ariela Tefisoa ny anarany, tena mitovy be @ Tendry sy Toavina izy !!!!!
Efa natolotray an'i JESOA KRISTY ny mahakasika azy rehetra! Anarana avy ao @ baiboly ny nakana ny Ariela ary no fiantsoana azy!!!! izao vao afaka nanao mis à jour ny blog !!! TAHIAN'i JESOA KRISTY velona sy mahery avy a ny nazaretra ndry ARIELA ary ho tonga lehibe ao @ FANJAKAN'i JESOA KRISTY ! AMENA DE AMENA
dihy fevrier 2014
Efa nihalehibe ireo ankizy izay nobeazina fahiny ary nasaina nampiseho ny talentany amin'ny dihy izy ireo. Izany dia hita ato anatin'ity video ity
Misia mazava video
1°]Ny iraka misia mazava
2 Ny Baiboly
3°]Ny soratra Masina